တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်အရေး တင်းမာနေချိန်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်တို့ အရေးကြီးကာကွယ်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆို ( တရုတ်နဂါးကို အရိုးထုတ်ပြီး အရည်ကျိုသောက်မယ့် အစီအစဉ်တော့ စလိုက်ပါပြီ....)
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်အရေး တင်းမာနေချိန်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်တို့ အရေးကြီးကာကွယ်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆို ( တရုတ်နဂါးကို အရိုးထုတ်ပြီး အရည်ကျိုသောက်မယ့် အစီအစဉ်တော့ စလိုက်ပါပြီ….)
a fella | 27/10/2020 | News | No Comments
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်အရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြား ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ဂြိုဟ်တုသတင်းအချက်အလက်တွေ ဝေမျှဖို့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂြိုဟ်တုသတင်းအချက်အလက်တွေ ရရှိမှုဟာ ဒုံးကျည်တွေ၊ မောင်းသူမဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ တခြားတိကျတဲ့ပစ်မှတ်တွေကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ အရေးပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်က နယူးဒေလီမြို့မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြ “2+2” ထိပ်တန်းအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ကြေညာခဲ့တာပါ။
အာရှဒေသအတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို တန်ပြန်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာအားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေတာလို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ပထဝီမြေပြင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက် (BECA)ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြား ချုပ်ဆိုတဲ့ အရေးကြီးစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာချုပ်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အရေးပါတဲ့ ပထဝီမြေပြင်နဲ့ လေကြောင်းအချက်အလက်တွေကို ရရှိမှာပါ။ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ နျူကလီးယားစွမ်းအင်၊ ကမ္ဘာမြေသိပ္ပံနဲ့ အစားထိုးဆေးပညာ ကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောတူစာချုပ်တွေလည်း ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက် “2+2” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွမ်ပီယို၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မက်ခ့်အက်စပါ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုင်ရှန်ကာ၊ အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရာဂျီနက်ဆင်းမ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေတဲ့ ဟိမဝန္တာနယ်စပ်ဒေသမှာ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်စစ်သည်တွေကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ အိန္ဒိယစစ်သည် ၂၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တင်းမာမှုတွေကို ဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အတွက် သံတမန်ရေးရာ ဆွေးနွေးမှုတွေ လနဲ့ချီ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်အထိတော့ သိသိသာသာ အရာမထင်သေးပါဘူး။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ထပ်ဖန်တလဲလဲ ဝေဖန်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေး ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။
နယ်စပ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြား တင်းမာနေချိန်ဟာ အာရှဒေသမှာ သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံက သဘောထားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တရုတ်နိုင်ငံသိအောင် အချက်ပြလိုက်ပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယအရာရှိတွေကတော့ ခက်ခဲတဲ့ သံတမန်ရေးရာ ကြိုးတန်းပေါ် လမ်းလျှောက်နေရသလိုပါပဲ။ အိန္ဒိယဟာ နယ်စပ်ဒေသ တင်းမာမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေသလို ရုရှားနိုင်ငံနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေရိကန်၊ ရုရှားနိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံလုံးနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကို ဟန်ချက်ညီအောင် ဘယ်လိုထိန်းမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
BECA စာချုပ်ဟာ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးခိုင်မာစေတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုအများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လက်နက်ဝယ်ယူမှု ၆၀၊ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရုရှားနိုင်ငံက ပံ့ပိုးပေးနေတာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံက အဲဒီအခြေအနေကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုလားနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ပံ့ပိုးမှု အားအကောင်းဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံနဲ့ နယျစပျအရေး တငျးမာနခြေိနျမှာ အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျတို့ အရေးကွီးကာကှယျရေးစာခြုပျ ခြုပျဆို ( တရုတျနဂါးကို အရိုးထုတျပွီး အရညျကြိုသောကျမယျ့ အစီအစဉျတော့ စလိုကျပါပွီ….)
တရုတျနိုငျငံနဲ့ နယျစပျအရေး တငျးမာမှုတှေ ဖွဈနခြေိနျမှာ အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံကွား ထိလှယျရှလှယျတဲ့ ဂွိုဟျတုသတငျးအခကျြအလကျတှေ ဝမြှေဖို့ စဈဘကျဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဂွိုဟျတုသတငျးအခကျြအလကျတှေ ရရှိမှုဟာ ဒုံးကညျြတှေ၊ မောငျးသူမဲ့ယာဉျတှနေဲ့ တခွားတိကတြဲ့ပဈမှတျတှကေို ပဈခတျတိုကျခိုကျဖို့ အရေးပါတယျလို့ သတျမှတျထားကွပါတယျ။ အောကျတိုဘာလ ၂၇ ရကျက နယူးဒလေီမွို့မှာ နှဈစဉျကငျြးပနကွေ “2+2” ထိပျတနျးအဆငျ့ ဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာ စဈဘကျဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျကို ကွညောခဲ့တာပါ။
အာရှဒသေအတှငျးမှာ တရုတျနိုငျငံရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို တနျပွနျနိုငျဖို့ ရညျရှယျပွီး အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ ဆကျဆံရေး ခိုငျမာအားကောငျးအောငျ လုပျဆောငျနတောလို့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ပထဝီမွပွေငျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျ ဖလှယျရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးသဘောတူညီခကျြ (BECA)ဟာ အမရေိကနျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့မဟာမိတျနိုငျငံတှကွေား ခြုပျဆိုတဲ့ အရေးကွီးစာခြုပျတဈခုဖွဈပါတယျ။ အဲဒီစာခြုပျအရ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ စဈရေးလှုပျရှားမှုအတှကျ အရေးပါတဲ့ ပထဝီမွပွေငျနဲ့ လကွေောငျးအခကျြအလကျတှကေို ရရှိမှာပါ။ အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံဟာ နြူကလီးယားစှမျးအငျ၊ ကမ်ဘာမွသေိပ်ပံနဲ့ အစားထိုးဆေးပညာ ကဏ်ဍတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သဘောတူစာခြုပျတှလေညျး ခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။
အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံတှရေဲ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှေ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကွတဲ့အတှကျ “2+2” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ထိပျတနျးအဆငျ့ ဆှေးနှေးပှဲမှာ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မိုကျပှမျပီယို၊ အမရေိကနျကာကှယျရေးဝနျကွီး မကျချ့အကျစပါ၊ အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဂြိုငျရှနျကာ၊ အိန်ဒိယကာကှယျရေးဝနျကွီး ရာဂြီနကျဆငျးမျတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလက အငွငျးပှားစရာ ဖွဈနတေဲ့ ဟိမဝန်တာနယျစပျဒသေမှာ အိန်ဒိယနဲ့ တရုတျစဈသညျတှကွေား တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့လို့ အိန်ဒိယစဈသညျ ၂၀ ဦး သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ တငျးမာမှုတှကေို ဖွလြှေော့နိုငျဖို့အတှကျ သံတမနျရေးရာ ဆှေးနှေးမှုတှေ လနဲ့ခြီ လုပျခဲ့ပမေဲ့ အခုအခြိနျအထိတော့ သိသိသာသာ အရာမထငျသေးပါဘူး။ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးမှုနဲ့ပတျသကျပွီး တရုတျနိုငျငံကို အမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့က ထပျဖနျတလဲလဲ ဝဖေနျခဲ့တဲ့အတှကျ ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးအတှငျး အမရေိကနျနဲ့ တရုတျနိုငျငံကွား ဆကျဆံရေး ဆိုးရှားခဲ့ပါတယျ။
နယျစပျအရေးနဲ့ပတျသကျပွီး အိန်ဒိယနဲ့ တရုတျနိုငျငံကွား တငျးမာနခြေိနျဟာ အာရှဒသေမှာ သူတို့ရဲ့အခနျးကဏ်ဍကို မွှငျ့တငျဖို့ အခှငျ့အရေးတဈရပျလို့ အမရေိကနျနိုငျငံက သဘောထားဖှယျရှိနပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အိန်ဒိယနိုငျငံက အမရေိကနျရဲ့ စဈဘကျဆိုငျရာ မဟာမိတျနိုငျငံဖွဈတယျဆိုတာကို တရုတျနိုငျငံသိအောငျ အခကျြပွလိုကျပုံပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အိန်ဒိယအရာရှိတှကေတော့ ခကျခဲတဲ့ သံတမနျရေးရာ ကွိုးတနျးပျေါ လမျးလြှောကျနရေသလိုပါပဲ။ အိန်ဒိယဟာ နယျစပျဒသေ တငျးမာမှုတှကေို လြှော့ခဖြို့ တရုတျနိုငျငံနဲ့ စဈဘကျဆိုငျရာ ဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျနသေလို ရုရှားနိုငျငံနဲ့လညျး ဆကျဆံရေး တညျဆောကျမှု ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အမရေိကနျ၊ ရုရှားနိုငျငံ ၂ နိုငျငံလုံးနဲ့ စဈဘကျဆိုငျရာ၊ ဗြူဟာမွောကျဆကျဆံရေးကို ဟနျခကျြညီအောငျ ဘယျလိုထိနျးမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာ ဖွဈနပေါတယျ။
BECA စာခြုပျဟာ အိန်ဒိယနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံကွား စဈဘကျဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးကို ပိုပွီးခိုငျမာစတေဲ့ ခွလှေမျးတဈရပျ ဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ စဈလကျနကျပစ်စညျး ဝယျယူမှုအမြားဆုံး နိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ လကျနကျဝယျယူမှု ၆၀၊ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ရုရှားနိုငျငံက ပံ့ပိုးပေးနတောပါ။ အမရေိကနျနိုငျငံက အဲဒီအခွအေနကေို ပွောငျးလဲဖို့ လိုလားနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈပိုငျးအတှငျး အိန်ဒိယနိုငျငံအတှကျ ကာကှယျရေးပစ်စညျး ပံ့ပိုးမှု အားအကောငျးဆုံး နိုငျငံတဈနိုငျငံ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အမှုန်မှန်မပေါ်လို့ အသတ်ခံရတဲ့ သားက အမေဖြစ်သူကို အိပ်မက်ပေးခဲ့လို့ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်
အီရန်မှာဖမ်းခံရတဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသားများအခြေအနေ မြန်မာအစိုးရစုံစမ်းနေ ( တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတော့ သံတမန်နည်းအရ ဖြေရှင်းဖို့ အီရန်ကို ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ပါပြီ….)
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်မှာ တပ်တွေဖြန့်ချထားလိုက်တဲ့ ရှရှားနှင့် စစ်ရှုံးရင် တရုတ်တို့ထွက်ပြေးနိုင်သော နေရာများ ( များများမလာနဲ့ သူတို့ဆီက အစွန်းထွက် သန်း ၂၀၀ လောက်ပဲဝင်လာတောင်…မြန်မာ့လူဦးရေ ရဲ့လေးဆ…)
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဖက်ဆီပထမဆုံးအကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရာ ထွက်လာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး HMS Queen Elizabeth ( တရုတ်တို့ ခုလိုလွှတ်လိုက်ရကောင်းလားလို့ နေတိုးအဖွဲ့ကို အပြစ်တင်မောင်းမဲကာ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေခဲ့ကြလေပြီ။ )